Glass Abamba Ukushisa, Multi-span Abamba Ukushisa, Smart Abamba - Hanyang
abamba ukushisa Commecial
ingilazi abamba ukushisa
abamba ukushisa polycarbonate
film Abamba Ukushisa
abamba ukushisa Agricultural
yemifino abamba ukushisa
imbali Abamba Ukushisa
-we abamba ukushisa
multi-span abamba ukushisa
emvelweni yokudlela abamba ukushisa
abamba ukushisa ezihlakaniphile
isimiso sokunisela ngenkasa
indawo elawula uhlelo
Abamba Ukushisa ezinye izinto
Qingzhou Hanyang Abamba Project Co., Ltd ikhulela Qingzhou Xianke Mechanical Kudivayisi Co., Ltd ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ekuthuthukiseni iinkambiso zemikhiqizo. Qingzhou Xianke Mechanical Kudivayisi Co., Ltd yasungulwa ngo-2010, futhi liye enikelwe umklamo, ucwaningo kanye nokukhiqiza abamba zobunjiniyela futhi isihlabathi izimayini machinery.After kweminyaka eminingi ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa professional kanye nokwakhiwa, ngo-2016 inkampani yethu yasungulwa osizayo inkampani Qingzhou Hanyang abamba Project Co., Ltd, Hanyang ezolimo ngokukhethekile abamba ukushisa design, ukukhiqizwa, ukwakhiwa, ukutshalwa nangemva-ukudayiswa service.
Le nkampani ihlanganisa indawo engaphezu kuka 15000 square metres, kanye workshop womshini ebangela two-thirds yonke indawo. Ishabhu womshini ifakwe izindawo ephelele kanye nesakhiwo kuyinto ihlanzekile futhi icocekile. Manje inkampani umise umnyango zokukhiqiza, umnyango izisebenzi, umnyango yokuthengisa, R & umnyango D, umnyango design, ukuthenga umnyango kanye neminye iminyango. Ihhovisi Izisebenzi eside esigculisayo azungeze 20 abantu, 15 onjiniyela lobuchwepheshe, abasebenzi ifektri izinze isikhathi eside abantu abangaphezu kuka-50, ukwakhiwa izisebenzi abantu 108, iningi benamakhono abasebenzi lobuchwepheshe ukuthi abahlanganyela kulo umkhakha iminyaka eminingi .
Ngemva kweminyaka eminingi iziphathimandla operation nocwaningo, sisebenzisa kakhulu izinga umkhiqizo futhi emva-sales service ukuwina amakhasimende futhi ukusungula izimakethe basekhaya nabamazwe angaphandle esitebeleni. Kuze kube manje, imikhiqizo yethu Nithengisé angaphezu kuka-30 ezifundazweni, komasipala, futhi izifunda ezizimele, futhi akhishwe ngempumelelo eRussia, eNdiya, eNingizimu Afrika, i-Vietnam, Bangladesh, Singapore, Nigeria, Kenya, Togo, Congo nakwamanye amazwe kanye izifunda. Sithole yenanelwa ububanzi futhi osungulwe eside ubuhlobo nokubambisana namakhasimende ezifuywayo kwezilwandle.
Imikhiqizo engcono kakhulu, the best service quality, intengo lowset, Hanyang kuzoletha kwenkundla xaxa egcekeni lakho, sizokwenza ujabule sokuyokhonza kuwe, wamukelekile ukuthi uxhumane.